“Mo ne Wɔn a Wosu Nsu”—Romafo 12:15 | Adesua
“Monkɔ so nkyekye mo ho mo ho werɛ na monhyehyɛ mo ho den.”​—1 TES. 5:11.
Dɛn na Yehowa yɛ de kyekye yɛn werɛ?
Kyerɛw nsɛm bɛn na ebetumi akyekye wɔn a wɔn biribi awu no werɛ?
Dɛn na asafo no betumi ayɛ de akyekye wɔn a wɔn biribi awu no werɛ?
1, 2. Wɔn a wɔn biribi awu no, ehia sɛ yehu sɛnea yɛbɛkyekye wɔn werɛ. Adɛn ntia? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.)
SUSI kae sɛ, “Yɛn babarima wu akyi bɛyɛ afe no, na yɛda so ara di ne wu no ho awerɛhow paa; na yegye yɛn ho a ennye.” Onua bi nso kae sɛ bere a ne yere wui mpofirim no, “ɛyaw a ɔtee wɔ ne nipadua mu deɛ, yɛnka.” Awerɛhosɛm ne sɛ, nnipa pii nso fa yaw a ɛte saa mu. Anuanom pii a wɔwɔ Kristofo asafo no mu anhwɛ kwan sɛ wɔn adɔfo bewuwu ansa na Harmagedon aba. Sɛ wo dɔfo bi awu anaa wunim obi a wahwere ne dɔfo a, ebia wubebisa sɛ: ‘Dɛn na yɛbɛyɛ de akyekye wɔn a ade atɔ wɔn ani no werɛ?’
2 Ebia woate sɛ ebinom ka sɛ, sɛ asɛm to wo na ɛkyɛ a, ɛyaw no so tew. Nanso, ɛyɛ ampa sɛ sɛ asɛm to wo na ɛkyɛ a, ɛno ara bɛma woanya awerɛkyekye? Okunafo bi kae sɛ, “Me deɛ mɛka a, ɛyɛ nea onipa no de ne bere yɛ mmom na ɛbɛma wanya awerɛkyekye.” Sɛ obi pira a, ɛsɛ sɛ wɔhwɛ mia kuru no na nkakrankakra atumi awu. Saa ara na sɛ obi dɔfo wu na yɛma yɛn ani kũ ne ho a, nkakrankakra ne yaw no so bɛtew. Ɛnde, dɛn pɔtee na ebetumi aboa wɔn a wɔn adɔfo awuwu ama yaw a wɔrefa mu no abrɛ ase?
YEHOWA​—“AWERƐKYEKYE NYINAA NYANKOPƆN”
3, 4. Sɛ obi biribi wu a, Yehowa nim yaw a onii no fa mu. Adɛn nti na yebetumi aka saa?
3 Akyinnye biara nni ho sɛ Yehowa paa na obetumi akyekye yɛn werɛ, efisɛ ɔno ne mmɔborɔhunu Agya. (Kenkan 2 Korintofo 1:3, 4.) Yɛreka obi a ɔwɔ tema paa a, ɔne Yehowa. Ɔmaa ne nkurɔfo awerɛhyem sɛ: “Me ara na mɛkyekye mo werɛ.”​—Yes. 51:12; Dw. 119:50, 52, 76.
4 Yehowa, ahummɔbɔ Agya no ankasa nso ahwere adɔfo. Wɔn mu bi ne Abraham, Isak, Yakob, Mose, ne Ɔhene Dawid. (Num. 12:6-8; Mat. 22:31, 32; Aso. 13:22) Onyankopɔn Asɛm no ma yɛn awerɛhyem sɛ Yehowa ani agyina n’adɔfo yi, na ɔrehwɛ kwan denneennen sɛ da no bedu ama wanyan wɔn aba nkwa mu bio. (Hiob 14:14, 15) Sɛ wɔba a, wɔn ani begye na wɔanya apɔwmuden. Momma yɛnkae nso sɛ, Onyankopɔn Ba a ɔdɔ no paa na ‘ɔpɛ n’asɛm yiye’ no wui yayaayaw. (Mmeb. 8:22, 30) Ɛyaw a Yehowa faa mu deɛ, yɛrennya nsɛm mpo na yɛde akyerɛ mu.​—Yoh. 5:20; 10:17.
5, 6. Dɛn na Yehowa yɛ de kyekye yɛn werɛ?
5 Yebetumi anya ahotoso paa sɛ Yehowa bɛboa yɛn. Enti sɛ yɛredi awerɛhow anaa yɛrefa yaw bi mu a, ɛnsɛ sɛ yɛtwentwɛn yɛn nan ase sɛ yɛbɛbɔ no mpae na yɛaka ne nyinaa akyerɛ no. Sɛ yehu sɛ yaw a yɛrefa mu nyinaa, Yehowa nim na ɔkyekye yɛn werɛ a, ɛma yɛn koma tɔ yɛn yam paa! Ɛnde, dɛn na ɔyɛ de kyekye yɛn werɛ?
6 Ade baako a Onyankopɔn de kyekye yɛn werɛ ne “honhom kronkron” no. (Aso. 9:31) Onyankopɔn adeyɛ tumi no tumi kyekye yɛn werɛ paa. Yesu hyɛɛ bɔ sɛ n’Agya a ɔwɔ soro no ayɛ krado sɛ ɔde “honhom kronkron bɛma wɔn a wobisa no.” (Luka 11:13) Susi a yɛaka ne ho asɛm dedaw no ka sɛ: “Mpɛn pii no, na yɛkɔ yɛn nkotodwe anim srɛ Yehowa sɛ ɔnkyekye yɛn werɛ. Bere biara a yɛbɛyɛ saa no, na yehu sɛ ampa, Onyankopɔn asomdwoe bɔ yɛn koma ne yɛn adwene ho ban.”​—Kenkan Filipifo 4:6, 7.
YESU​—ƆSƆFO PANYIN A ƆWƆ TEMA
7, 8. Adɛn nti na yebetumi anya awerɛhyem sɛ Yesu bɛkyekye yɛn werɛ?
7 Yehowa wɔ tema na odwen nnipa ho paa. Saa ara na Yesu nso te. Ɔwɔ asase so no, nsɛm a ɔkae ne nea ɔyɛe nyinaa daa no adi sɛ osuasuaa n’Agya pɛpɛɛpɛ. (Yoh. 5:19) Yehowa somaa Yesu sɛ ɔmmɛkyekye wɔn a wɔn ‘koma abubu’ ne “wɔn a wodi awerɛhow nyinaa” werɛ. (Yes. 61:1, 2; Luka 4:17-21) Enti ɔdaa tema adi kyerɛɛ nkurɔfo. Ɔhaw a na nkurɔfo refa mu nyinaa na onim, na na ɔpɛ paa sɛ ɔboa ma wɔn ho tɔ wɔn.​—Heb. 2:17.
8 Bere a Yesu yɛ abofra no, akyinnye biara nni ho sɛ n’abusuafo ne ne nnamfo binom wuwui. Bere a Yosef a ɔtetee Yesu wui no, ɛbɛyɛ sɛ na Yesu da so ara yɛ aberantewaa anaa na wadi mfe 20 ne kakra. * Wo ara hwɛ aberantewaa a odwen nnipa ho sei a ɔredi awerɛhow na ɔresan akyekye ne maame ne ne nuanom mmea ne mmarima werɛ.
9. Bere a Lasaro wui no, dɛn na Yesu yɛe de kyerɛe sɛ ɔwɔ tema?
9 Bere a Yesu reyɛ ne som adwuma no, na onim nea nnipa refa mu paa na na ɔte wɔn ase. Wo deɛ yɛmfa bere a n’adamfo Lasaro wui no nyɛ nhwɛso. Ná Yesu nim sɛ obenyan Lasaro, nanso ɛyaw a na Maria ne Marta refa mu no kaa no paa. Ɛkaa no araa ma osui.​—Yoh. 11:33-36.
10. Adɛn nti na yebetumi anya awerɛhyem sɛ Yesu da so ara wɔ tema?
10 Sɛnea Yesu daa tema adi na ɔkyekyee afoforo werɛ no, ɛboa yɛn sɛn nnɛ? Kyerɛwnsɛm no ma yɛn awerɛhyem sɛ “Yesu Kristo te sɛnea ɔte, ɛnnɛra ne nnɛ, ne daa daa.” (Heb. 13:8) “Nkwa Safohene no” nim sɛnea obi dɔfo wu a ɛte. Enti “obetumi atwitwa agye wɔn a wɔsɔ wɔn hwɛ no.” (Aso. 3:15; Heb. 2:10, 18) Yebetumi anya awerɛhyem sɛ ɛnnɛ nso sɛ obi di awerɛhow a, Kristo te no ase na ɛka no paa. Ɔbɛkyekye onii no werɛ “bere a ɛsɛ mu.”​—Kenkan Hebrifo 4:15, 16.
“KYERƐWNSƐM NO MU AWERƐKYEKYE”
11. Kyerɛw nsɛm bɛn na woahu sɛ ɛma awerɛkyekye paa?
11 Bible ka sɛ bere a Lasaro wui no, Yesu dii awerɛhow kɛse. Kyerɛw nsɛm a ɛma awerɛkyekye saa pii wɔ Onyankopɔn Asɛm no mu. Wei nyɛ nwonwa efisɛ “biribiara a wɔakyerɛw ato hɔ no, wɔakyerɛw ama yɛn nkyerɛkyerɛ, na yɛnam yɛn boasetɔ ne Kyerɛwnsɛm no mu awerɛkyekye so anya anidaso.” (Rom. 15:4) Sɛ woredi awerɛhow a, kyerɛw nsɛm a edidi so yi betumi akyekye wo werɛ:
“Yehowa bɛn wɔn a wɔn koma abubu; ogye wɔn a wɔn honhom abotow.”​—Dw. 34:18, 19.
“Sɛ me mu dadwen yɛ bebree a, [Yehowa awerɛkyekye] na ɛma me kra ani gye.”​—Dw. 94:19.
“Yɛn Awurade Yesu Kristo, ne yɛn Agya Onyankopɔn a ɔdɔɔ yɛn na ɔmaa yɛn daa awerɛkyekye ne anidaso pa wɔ adom mu no, ɔnkyekye mo koma werɛ, na ɔmma munnyina pintinn.”​—2 Tes. 2:16, 17. *
YENYA AWERƐKYEKYE PAA WƆ ASAFO NO MU NSO
12. Ade titiriw bɛn na yebetumi ayɛ de akyekye afoforo werɛ?
12 Ade foforo a ɛma wɔn a wɔredi awerɛhow nya awerɛkyekye ne Kristofo asafo no. (Kenkan 1 Tesalonikafo 5:11.) Wɔn a wɔn ‘honhom abotow’ no, dɛn na wubetumi ayɛ de aboa wɔn na woakyekye wɔn werɛ? (Mmeb. 17:22) Kae sɛ “kommyɛ wɔ ne bere, na ɔkasa nso wɔ ne bere.” (Ɔsɛnk. 3:7) Okunafo bi a wɔfrɛ no Dalene kae sɛ: “Sɛ obi dɔfo wu a, ɛyɛ a ɔpɛ sɛ onya obi ka ne koma mu asɛm kyerɛ no. Enti sɛ ade tɔ obi ani a, nea wubetumi ayɛ ama no paa ne sɛ wobɛyɛ aso atie no a wuntwa n’ano.” Junia nuabarima kum ne ho. Ɔno nso kaa wɔn a wɔn dɔfo awu a wɔredi awerɛhow ho asɛm sɛ: “Ɛwom, wuntumi nte awerɛhow a wɔredi no ase nwie. Nanso nea ehia paa ne sɛ wopɛ sɛ wuhu nea wɔrefa mu.”
13. Dɛn na ɛsɛ sɛ yehu fa awerɛhodi ho?
13 Kae nso sɛ ɛsono sɛnea obiara di awerɛhow. Nea ɔda ne gya na onim sɛnea ɛhyehye no fa, enti ɛtɔ da a ebetumi ayɛ den ama no sɛ ɔbɛkyerɛ mu ama afoforo ate no ase. Onyankopɔn Asɛm ka sɛ: “Koma na onim onipa kra awerɛhow, na n’anigye nso, ɔhɔho mfa ne ho nnyigye mu.” (Mmeb. 14:10) Sɛ obi tumi ka nea ɔrefa mu mpo a, ɛnyɛ bere nyinaa na ɛyɛ mmerɛw sɛ afoforo bɛte no ase.
14. Dɛn na yebetumi aka de akyekye wɔn a wɔn adɔfo awu werɛ?
14 Ebetumi ayɛ den sɛ yebehu nea yɛbɛka akyerɛ obi a ɔredi ne dɔfo wu ho awerɛhow. Nanso Bible ka sɛ ‘anyansafo tɛkrɛma sa yare.’ (Mmeb. 12:18) Nhomawa a wɔato din Bere a Obi a Wodɔ No Awu no aboa nnipa pii ma wɔanya nsɛm a wobetumi de akyekye afoforo werɛ. * Nanso mpɛn pii no, ade a wubetumi ayɛ aboa wɔn a wɔredi awerɛhow ne sɛ ‘wo ne wɔn a wosu besu.’ (Rom. 12:15) Gaby a ne kunu awu no kae sɛ: “Sɛ nneɛma hyɛ me so na minhu nea menyɛ a, na ato nusu. Enti sɛ me nnamfo ne me su a, ɛkyekye me werɛ. Ɛba saa a, ɛmma mente nka sɛ meyɛ ankonam.”
15. Sɛ ɛyɛ den ma yɛn sɛ yɛbɛkɔ obi hɔ akɔkyekye ne werɛ a, dɛn na yebetumi ayɛ? (Hwɛ adaka a wɔato din, “ Awerɛkyekyesɛm a Ɛka Koma” no nso.)
15 Sɛ ɛyɛ den ma wo sɛ wobɛkɔ obi hɔ akɔkyekye ne werɛ a, wubetumi akyerɛw krataa akɔhyɛ no den anaa woakyerɛw nsɛm bi a ɛka koma agu kaad so de amena no. Wubetumi nso de nkuranhyɛsɛm afa e-mail anaa text message so akɔma no. Bio nso, kyerɛwsɛm bi a ɛma awerɛkyekye no, wubetumi afa mu asɛm aka. Onii a wawu no, sɛ wokae ne suban pa bi a, wubetumi aka ho asɛm. Ebia wo ne nea wawu no boom yɛɛ biribi maa mo ani gyei. Ɛno nso wubetumi aka ho asɛm. Junia ka sɛ: “Sɛ onua anaa onuawa bi kyerɛw nkuranhyɛsɛm tiawa bi brɛ me anaa ɔto nsa frɛ me sɛ memmɛsra no a, ɛboa me paa. Nneɛma a ɛte saa ma mete nka sɛ anuanom dɔ me na wodwen me ho.”
16. Dɛn ne ade foforo a ɛboa paa ma yɛkyekye afoforo werɛ?
16 Sɛ yɛne onua anaa onuawa bi a wahwere ne dɔfo bɔ mpae a, etumi kyekye ne werɛ. Yɛbɔ mpae ma no nso a, ɛboa paa. Ebia na awerɛhow amene wo na wopɛ sɛ wusu mpo. Ɛba saa a, ebetumi ayɛ den ama wo sɛ wo ne onii no bɛbɔ mpae. Wo nne betumi apopo na woasu mpo, nanso sɛ wumia w’ani a, wo mpaebɔ no betumi akyekye ne werɛ paa. Dalene kaa nea ɛtoo no. Ɔkae sɛ: “Ɛtɔ da na anuanom mmea bi bɛsra me a, ɛyɛ a meka kyerɛ wɔn sɛ wɔne me mmɔ mpae. Wofi mpaebɔ no ase a, mpɛn pii no wonhu nea wɔnka. Nanso ɛnkyɛ na wɔn nsɛm asisi so. Afei wobɛhwɛ na wɔreka nsɛm a ɛka koma paa. Wɔn gyidi a ɛyɛ den, wɔn dɔ, ne sɛnea wɔwɔ tema no hyɛ me den paa.”
KƆ SO KYEKYE WƆN WERƐ
17-19. Adɛn nti na ehia sɛ yɛkɔ so kyekye wɔn a ade atɔ wɔn ani werɛ?
17 Ɛsono sɛnea obiara di awerɛhow. Ebi deɛ kyɛ paa, na ebinom nso deɛ nkyɛ saa. Sɛ ade tɔ obi ani a, ahyɛase no, nnamfo ne abusuafo pii begyam no. Nanso, abosome bi akyi no, na obiara agyaw no hɔ akɔtoa n’adwuma so. Enti nyi nea ne dɔfo awu no baako nhyɛ ne nsa. Bible ka sɛ: “Ɔyɔnko berɛbo dɔ bere nyinaa; ɔyɛ onua a wɔwoo no maa ahohia da.” (Mmeb. 17:17) Sɛ obi a wahwere ne dɔfo de bere kakraa bi na ebedi awerɛhow oo, sɛ ɔde bere pii oo, ɛsɛ sɛ ne nuanom Kristofo kɔ so kyekye ne werɛ.​—Kenkan 1 Tesalonikafo 3:7.
18 Kae sɛ, sɛ obi dɔfo wu a, nneɛma pii betumi akae ne yaw. Ebi ne sɛ edu da a ne dɔfo no wui biara a, ne werɛ betumi ahow. Afei, nnwom, mfonini, dwumadi ahorow, biribi hua, nnyigyei bi, anaa bere pɔtee bi wɔ afe no mu nso betumi ama wadi awerɛhow. Sɛ obi aware mu hokafo wu, na ɛsɛ sɛ ɔno nko ara yɛ nneɛma bi a na wɔbom yɛ a, ɛno nso betumi ama wadi yaw pii. Ebi ne ɔmansin nhyiam anaa Nkaedi. Onua bi a ne yere wui kae sɛ: “Ná minim sɛ ɛda a yɛde waree no du a, ɛbɛhaw me paa. Ampa-ne-ampa ara, eduu so no, na ɛnyɛ mmerɛw. Nanso anuanom mmea ne mmarima bi yɛɛ nhyehyɛe too pon kakra maa me ne me nnamfo a yɛbɔ kosua tafere. Wɔyɛɛ saa na amma manyɛ ankonam.”
19 Nanso kae sɛ, ɛnyɛ mmere titiriw nko ara na ɛsɛ sɛ yɛkyekye wɔn a ade atɔ wɔn ani werɛ. Junia ka sɛ: “Mpɛn pii no, sɛ ɛnyɛ mmere titiriw, na afoforo bɛboa wo hyɛ wo nkuran a, ɛboa paa. Sɛ wokyekye onipa no werɛ wɔ mmere a ɛte saa mu a, etumi ma ne koma tɔ ne yam.” Nokwasɛm ne sɛ, sɛ obi hwere ne dɔfo a, awerɛhow a odi no, yɛrentumi nyi ne nyinaa mfi hɔ. Nanso yebetumi ayɛ nneɛma bi de aboa no ama ne koma atɔ ne yam na akyekye ne werɛ. (1 Yoh. 3:18) Gaby ka sɛ: “Meda Yehowa ase paa sɛ ɔhaw yi nyinaa mu no, ɔmaa mpanyimfo no boaa me na wɔanyi me baako anhyɛ me nsa. Nea wɔyɛe no ama mete nka sɛ Yehowa ayɛ me atuu.”
20. Adɛn nti na Yehowa bɔhyɛ ahorow kyekye yɛn werɛ?
20 Yehowa a ɔyɛ awerɛkyekye nyinaa Nyankopɔn no beyi awerɛhow nyinaa afi hɔ na wama yɛanya awerɛkyekye daa. Saa bere no, “wɔn a wɔwɔ nkae ada mu nyinaa bɛte [Kristo] nne na wɔafi adi”! Wei yɛ awerɛkyekyesɛm paa. (Yoh. 5:28, 29) Onyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ “ɔbɛmene owu akosi daa, na Awurade Tumfoɔ Yehowa bɛpopa obiara aniwam nusu.” (Yes. 25:8) Saa bere no, ‘yɛne wɔn a wɔresu rensu.’ Mmom, nnipa a wɔwɔ asase so nyinaa ne ‘wɔn a wɔredi ahurusi bedi ahurusi.’​—Rom. 12:15.
^ nky. 8 Bere a etwa to a Bible kaa Yosef ho asɛm no, na Yesu adi mfe 12. Yesu anwonwade a edi kan no, ɔmaa nsu danee nsã. Saa bere no, yɛante sɛ na Yosef wɔ hɔ. Ɛno akyi nso Bible no nka ne ho asɛm. Bere a wɔbɔɔ Yesu asɛndua mu no, ɔde Maria hyɛɛ ɔsomafo Yohane nsa sɛ ɔnhwɛ no. Sɛ Yosef te ase a, yennye nni sɛ anka Yesu bɛyɛ saa.—Yoh. 19:26, 27.
^ nky. 11 Kyerɛw nsɛm foforo a nnipa pii ahu sɛ ɛma awerɛkyekye ne Dwom 20:1, 2; 31:7; 38:8, 9, 15; 55:22; 121:1, 2; Yesaia 57:15; 66:13; Filipifo 4:13; ne 1 Petro 5:7.
^ nky. 14 Hwɛ asɛm a n’asɛmti ne “Kyekye Wɔn a Wɔn Biribi Awu no Werɛ Sɛnea Yesu Yɛe No.” Ɛwɔ Ɔwɛn-Aban, January–March, 2011 mu.
Awerɛkyekyesɛm a Ɛka Koma
Wei yɛ nsɛm a ebinom akyerɛw de akɔkyekye wɔn a wɔn adɔfo awuwu werɛ:
“Yenhu nea yɛnka. Ɛno ara ne sɛ, yɛdɔ wo. Nea worefa mu no, yennim. Nanso Yehowa nim, na ɔbɛkɔ so aboa wo. Yegye di sɛ yɛn mpaebɔ no bɛma wo ho adwo wo kakra.”
“Yenim sɛ woahwere ade kɛse. Yɛn mpaebɔ ne sɛ Yehowa mmoa wo.”
“Onyankopɔn kae wo dɔfo no. Onim ne ho biribiara, na ɔbɛsan anyan no aba nkwa mu. Yegye di sɛ saa nokwasɛm yi bɛkyekye wo werɛ.”
“Ɔtamfo a otwa to a ɔne owu no rennya wo dɔfo no so tumi bio. Nneɛma pa a ɔyɛe no, yɛbɛkɔ so akae kosi sɛ wobenyan no wɔ Paradise.”
“Wo dɔfo no wu ho yaw a woredi no, yɛrennya nsɛm mpo na yɛde akyerɛ mu. Yɛrehwɛ kwan sɛ yɛn soro Agya no benyan wo dɔfo no aba nkwa mu bio. Saa bere no, anigye a wubenya no, yɛrennya nsɛm mpo na yɛde akyerɛ mu.”